Jiri igodo backspace ọzọ na Chrome na ndọtị a | Akụkọ akụrụngwa
Jiri igodo backspace ọzọ na Chrome na ndọtị a
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mmalite ya, Chrome tara ahụhụ ma ọ bụ nwee ọ alwaysụ mgbe niile, dabere n'otú ị si ele ya anya, nhọrọ zoro ezo na keyboard nke na-enye anyị ohere ịlaghachi na peeji nke gara aga site na ịpị igodo backspace. Nhọrọ a bara uru maka ọtụtụ ndị ọrụ mana ezigbo nro maka ọtụtụ ndị ọzọ bụ ndị hụrụ otú ọganihu niile si aga na ha emejuputara fọm furu efu mgbe ịpị igodo nhichapụ n'amaghị ma ọ bụ cheta n'oge ahụ, na arụghị ọrụ dị na Chrome na ọrụ Windows ahụ mana ọ bụ igodo backspace. Ọnwa ole na ole gara aga, Chrome kwupụtara na mmelite ya ọzọ ga-ewepụ atụmatụ ahụ jọgburu onwe ya. Ekwughi ekwu bụ emeghị eme. Mmelite ikpeazụ emeela ka anyị nwee ike iji igodo backspace ihichapụ ma ghara ịlaghachi na peeji nke mbụ.
Google gara n'ihu iwepu n'ihi na enwere ọtụtụ ndị enweghị obi ụtọ n'iji ihe nchọgharị ahụ site na ịhapụ ọganihu ha mere dejupụta ụdị mgbe ha mehiere ma pịa igodo nhichapụ. Otu nzuzu na-atụle afọ ole atụmatụ ahụ dị na Chrome dị ka a ga-asị na ha achọpụtala nsogbu ọ kpatara maka ọtụtụ ndị ọrụ. Mana ọ bụghị ndị ọrụ niile na-asọ oyi na ọrụ nke igodo ahụ. Maka ha niile, anyị nwere Go Back With Backspace extension, ndọtị nke Google.
Laghachi Backspace na-enye anyị ohere iji igodo backspace laghachi na peeji nke mbụ. Ma n'adịghị ka nhọrọ ahụ arụnyere nwa afọ. Laghachi azụ na Backspace anyị nwere ike igosipụta ọnọdụ akọwapụtara dịka mgbe anyị na-ede ederede ma ọ bụ mgbe anyị na-agagharị na ntọala ihe nchọgharị. Mana ọ bụrụ n’ịchọghi iji mgbati a, ịnwere ike iji igodo Alt igodo + wee gaghachi na peeji ahụ tupu nke ị gara. Nchikota igodo nke na adighi ka ihe Backspace ma o gha egbochi anyi itinye mgbakwunye a ma oburu na anyi abughi ndi oru ha.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Jiri igodo backspace ọzọ na Chrome na ndọtị a
CPR11, Spanish bụ “Egwuregwu Egwuregwu” nke FIFA kwadoro
BlackBerry na-ebupụta mmelite iji dozie Quadrooter na njedebe ya